Yakabatana: Yemahara Inoshanda Platform | Martech Zone
Yakabatana: Yemahara Inoshanda Platform
Muvhuro, Zvita 9, 2013 Muvhuro, Zvita 9, 2013 Douglas Karr
Kubatana inopa gore rekushambadzira tekinoroji uye zvinoshandiswa zvinogonesa sangano rako kubata rese rezvemagariro kushambadzira ehupenyu, kuendesa yakajeka uye yakaenzana ROI. Chikuva chakabatana chinopa hwakabatana system yezvinyorwa zvemakambani, vamiririri uye vatengesi.
kubatsira Yakabatana Social Operating Platform
Ive wega uye chengetedza rako rekushambadzira data - Iyo Social Operating Platform inobatanidza ese ma agency, vatengesi uye mabrands aunoshanda nawo mune imwechete gore rekushambadzira system, ichikupa iwe kuona kwakazara kwesangano rako rese rekushambadzira. Ipa simba kukambani yako kuti ifambe nekukurumidza uye nekuchinja - unogona kuchinja vamiririri, vatengesi kana zvikwata zvemukati musina kumborasikirwa nenhoroondo dzekare.
Ita misangano yakaoma yemagariro - Svikira vatengi panguva yakakodzera, ine chaiyo meseji, kune akawanda masocial network kubva kune imwechete chikuva. Iyo Social Operating Platform inogonesa mamaneja enharaunda, vanoronga vezvenhau nemasangano ekugadzira kuti vashande vakanangana nechinangwa chimwe chete - kumisikidza vateereri vako.
Gadziridza yakabhadharwa, yevaridzi uye yakawanikwa midhiya - Gadzira madhora ese aunoshandisa pane vezvenhau enda mberi - ona zvinopfuura kudzvanya uye kutaridzika uye wotanga kugadziridza huwandu hwekunzwisisa nekunzwisisa kuti midhiya yako yakabhadharwa inogadzira sei yakawedzera midhiya kukosha kana vanhu vachiita nezvako zvemukati. Iyo Social Operating Platform ndiyo chete mhinduro inounza pamwechete yakabhadharwa, ndeyayo uye yakawanikwa midhiya.
Dudziro hombe data muRoyi - Ita nyore kupupura kwako nekupa zviito zvemagariro (zvido, makomendi, masheya, maTweets, nezvimwewo) kukosha kwavo kwedhora, zvichikugonesa kuenzanisa nekukwiridzira kudzoka kwakanyanya mukudyara. Bvumira munhu wese ari muchikwata chako kuyera mashandiro anoenderana neRI, pachinzvimbo chekutarisa pane akapfava kana asina kujeka metric sekubatana kana kusvika.
Ita sarudzo dzinotungamirwa nedata - Iyo Yemahara Inoshanda Platform inowedzeredza uye nekuyera yako yekushambadzira data kuti upe mhinduro kumibvunzo senge ipuratifomu inogadzira iyo yakakura ROI yemushandirapamwe uyu? Ndeupi mutengesi kana PMD akaita zvakanyanya panguva yakapihwa-nguva? Tingaite sei kushandisa mari kushambadziro yemagariro zvinobudirira?
Iyo Yakabatana Yemagariro Hupenyu Hupenyu
Tags: yakawana midhiyanhepfenyurovanobhadharwa midhiyamishandirapamwe yemagarirosocial operating systemkubatanakubatana kwevanhu
Tengesa, Sevhisi uye Musika neSalesforce1
SEO inopesana neNew SEO